GB / T DC Basy
Socket EV 2
Type 1 hatramin'ny Type 2
Type 2 hatramin'ny Type 2
Karazana tariby 1 tsy voafehy
Karazana tariby 2 tsy voafehy
Type 1 hatramin'ny Type 2 Adapter
Type 2 hatramin'ny Type 1 Adapter
Tesla mankany amin'ny adaptatera J1772
J1772 mankany Tesla Adapter
CCS 1 hatramin'ny CCS 2 Adapter
CCS 2 hatramin'ny CCS 1 Adapter
RCD iray karazana
Soraty ny RCBO
Maody famoahana EV
Marika mpitondra fiara elektrika
Fiampangana ny toeram-piasana
Mifanaraka amin'ireo marika mpamily plug-in rehetra izahay
Ento ny tranon'ny mpamily EV rehetra. Ny vahaolana amin'ny famandrihana an-trano dia misy ny fametrahana sy ny fampiasana ny teboka fihenam-bidy ary manome fidirana amin'ny fonosana feno amin'ny serivisy famandrihana hendry.
Omeo vahaolana ho an'ny mpiasa sy ny vahiny mora ampiasaina. Miaraka amin'ny fahitana angon-drakitra tafiditra, fampiasa fanaraha-maso ary serivisy midadasika, dia ho azonao antoka fa ny famandrihana amin'ny toeran'ny orinasanao dia sady mahomby no tsy miraharaha.
Avelao ny mpamily anao hanana traikefa tsy misy tohiny na aiza na aiza alehany. Miaraka amin'ny fidirana amin'ireo teboka fiampangana vahoaka maherin'ny 2.000 ao anatin'izany ny teboka fiampangana 800 mahery any Angletera, manolotra karatra fiampangana sy fampiharana an'i NewMotion. Gara Station MIDA Group EV
Tongasoa eto amin'ny vondrona MIDA
Shanghai Mida EV Power Co., Ltd. dia mpamokatra teknolojia avo lenta an'ny fitaovana fampitaovana herinaratra herinaratra vaovao, amin'ny maha mpanamboatra EVSE matihanina azy, MIDA Group dia mifantoka amin'ny fanomezana mpanjifa fitaovana famandrihana matihanina izay azo antoka, mahomby kokoa ary milamina kokoa. Ny vokatra EV an'ny MIDA dia mifantoka amin'ny tsenan'ny trano sy ny varotra eo amin'ny sehatry ny fiampangana EV. Ao anatin'izany ny karazana EV Connector sy EV Charger Sockets, EV Charging Cables, Portable EV Charger, EV Adapter, CCS Combo 2 Connector & inlets, CCS Combo 1 Connector , CHAdeMO Plug, EV Charging Station, DC Charger Station, EV Charger Moudle ary EV Accessories. Ny vokatray rehetra dia mahazo ny mari-pahaizana CE, TUV ary UL. MIDA Group dia manana traikefa amin'ny indostria, manome lanja ny tamberina avy amin'ny mpanjifa tsirairay, ary manolo-tena tsy tapaka amin'ny fanitarana ny asan'ny vokatra sy fanatsarana ny fahombiazan'ny vokatra. Misy serivisy OEM sy ODM. Ny vokatray dia malaza any Eropa, Amerika, Azia sns. Amin'izao fotoana izao, Mida Group dia mitandrina ny fampandrosoana ny indostrian'ny motera vaovao momba ny angovo vaovao. Tapa-kevitra ny ho tonga mpitarika ny indostria sy mpanavao isika.
Mamokatra andalana 2
Vidiny ambongadiny China China DC Quick Charger EV ...
Lock elektromagnetika ho an'ny herinaratra mitondra herinaratra ...
DUOSIDA 16A 32A 3 Phase Type 2 Socket misy inte ...
10M 32A 40A Type 1 EV mamaly ny tariby fanitarana ...
American 150A CCS2 mankany CCS1 Adapter Fast Charge ...
150A 200Amp CCS Type 2 Socket DC Fiampangana haingana ao ...
Toeram-piambenana fiara mpitondra herinaratra
Shanghai Mida EV Power Co., Ltd. dia mpanamboatra teknolojia avo lenta amin'ny fitaovana enti-mandeha fiara elektrika vaovao, ao anatin'izany ny karazana EV Connector sy EV Charger Sockets, EV Charging Cables ...
© Copyright - 2018-2021: Shanghai Mida EV Power Co., Ltd. Zo rehetra voatokana
Kaongresy momba ny fiara elektrika manerantany faha-34 (EVS34） Jul-09-2021
Global Market Charging Cables (2021 hatramin'ny 2027) ... Mey-31-2021
CCS eropeana (Type 2 / Combo 2) mandresy izao tontolo izao ... Mey-23-2021
Manampia: No.377 an'ny ChengPu Road, Distrikan'i Fengxian Shanghai 201499, Sina
Finday: + 86-18221956895
Avelao ny hafatrao: